Ihe ọhụrụ Macbook Pro na-eme vidiyo vidiyo okpukpu abụọ dị ka nke gara aga | Esi m mac
Ihe ọhụrụ Macbook Pro na-eme vidiyo vidiyo ngwa ngwa dị ka nke gara aga
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | MacBook Pro, Noticias, ọtụtụ
Mgbe a tọhapụrụ ngwa ọ bụla Apple ọ bụla, ọ na-agbaso emume a na-eme ugboro ugboro. Na nke mbụ, a na-amata ngwa ọrụ ahụ site na mpụga: echiche zuru oke, akụkụ, ibu, na akụkọ, nke na nke a nke Macbook Pro 2016, bụ USB-C na Touch Bar. Nzọụkwụ nke abụọ na-abụkarị iji gbasasịa. akụrụngwa ịmara akụrụngwa ya, nkesa ha na ihe nzuzo ọ bụla nwere ike ghara ịpụta. Na nke ikpeazụ bụ jiri ya tụnyere arụmọrụ nke akụrụngwa ọhụrụ ahụ, ya na onye bu ya ụzọ ma hụ ihe mere.
Iji tụnyere arụmọrụ nke Macbook Pro na nke yiri nke ahụ, anyị ga-emerịrị usoro nke na-erepịakwa ọtụtụ akụ na site na fcp.co emeela ule na-eso nke a.
Ngwaọrụ ejirila 2016, Macbook Pro 15 na onye bu ya ụzọ bu Macbook Pro retina 2012. Ihe si na ya pụta bụ na igwe ọhụrụ emeela otu usoro ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara oge.
27 MacBook Pro na Retina Ngosipụta 2012
A na-anwale ule ahụ na ọhụrụ version nke Final Cut Pro, ntụgharị mbipute 10.3. Ejiri otu oru ahụ, tinye n'ime otu ọba akwụkwọ. Ihe oru ngo a gunyere: ihe ndi ozo, ntughari, Multicam clips (ha bu mkpachị nwere otutu ihe omuma ebe obu na eweputara otu onyonyo site n’akuku di iche). The esichara faịlụ kemgbe Nlekọta 422 (asụsụ ala Apple) na kọmputa abụọ ahụ jikọọ na otu Thunderbold drive.
Emere nha site na ịtinye ọrụ ahụ, nke ahụ bụ, sonyere ụgbọelu niile na mgbakwunye iji nweta vidiyo ikpeazụ. Mgbe 2012 Macbook Pro retina chọrọ Nkeji 5 na nkeji 50 N'ime usoro ahụ, 2016 ″ Macbook Pro 15 ọhụrụ ejirila Nkeji 3 na nkeji 5.
Wiggins, onye editọ fco.co, onye duziri ule ahụ, na-agbakwunye na arụmọrụ a bụ nke kachasị arụ ọrụ ị hụla.
Modeldị 15 nke anụ ọhịa ahụ na Blackmagic Video Desktop ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ arụnyere na UltraStudio Express gosipụtara na ọ kachasị kwụsie ike HD agbasa ozi m nwetara.
N'ikpeazụ, ọ na-ekwu maka akụkụ ụfọdụ nke kọmputa ahụ, dịka SSD, ihuenyo na trackpad, nke na-enyere aka nke ukwuu na usoro ndezi ahụ. Karịsịa diski SSD nke na-enye ọtụtụ dynamism na ọsọ na usoro. O kwubiri na usoro a adighi oso na 13 ″ mbipute ma o nwere ike zuru oke mgbe anyi na aru oru n’ime ugbo elu ma obu cafeteria.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe ọhụrụ Macbook Pro na-eme vidiyo vidiyo ngwa ngwa dị ka nke gara aga
4K kacha mma na 5K USB-C na Thunderbolt 3 Ọkwọ ụgbọala maka Mac
Onye na-ese French na-eme ka ndị ochie Mac ghọọ ite ifuru